इमान्दार र सच्चा कम्युनिष्टहरुले काँग्रेसलाई भोट हाल्न सक्दैनन्ः रावल
इमान्दार र सच्चा कम्युनिष्टहरुले काँग्रेसलाई भोट हाल्न सक्दैनन्ः रावल हिंसा अन्त्यका लागि आफ्नो विशेष पहल रहने: नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार कुँवर
एकेन्द्र महता आइतबार, वैशाख २५, २०७९
नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद डा. भीम बहादुर रावलले इमान्दार र सच्चा कम्युनिष्टले नेपाली काँग्रेसलाई भोट हाल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर १४ पातलकोटमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै डा. रावलले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने अनि दक्षिणपन्थी भन्दै आएको काँग्रेससंग कुन आधारमा एकता भएको भनेर प्रश्न गर्नु भयो।
उहाँले सत्ता स्वार्थको लागि काँग्रेससंग कार्यगता एकता गर्नु जनता माथिको धोका भएको जिकिर गर्नु भयो। सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीले काँग्रेसलाई भोट हाल्न नसक्ने धारणा राख्नु भयो। उहाँले नेकपा एमालेबाट बनेका उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानमा लाग्नको लागि आग्रह गर्नु भएको छ। एमालेका उम्मेदवार विजय भए मात्रै देशमा विकास निमार्णका कार्यले तिव्रता पाउने भएकाले एमालेबाट बनेका उम्मेदवारलाई जिताउने आग्रह गर्नु भएको हो।
उहाँले उच्च मनोवलका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने अभियानमा लाग्नको लागि निर्देशन दिनु भएको हो। उहाँले आफू एक्लै राष्ट्रियताको पक्षमा उभिदै आएको बताउँदै केहि व्यक्तिले आफू माथि गर्ने गरेको टिप्पणीले कुनै फरक नपर्ने बताउनु भयो।
चुनावी आमसभालाई सम्वोधन गर्दै बाम गठबन्धनको तर्फबाट नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार पशुपति कुँवरले महिला, दलित, विभिन्न वर्ग क्षेत्रमा हुँदै आएको विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि आफ्नो विशेष पहल रहने बताउनु भयो।
उहाँले आफूलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर विजयी गराउन समेत आग्रह गर्नु भयो। उहाँले बेरोगारी समस्यालाई निर्मूल पार्नको लागि पालिकामा सीपमूलक तालिम देखि लिएर रोजगारीका सवालमा गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भएको छ।
चुनावी आमसभामा बोल्दै साँफेबगर नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख पदका उम्मेदवार रंग बहादुर ठकुल्लाले बाम गठबन्धनसंग ठूलो जनमत भएका कारण जित सुनिश्चित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरी सके पछि नगरपालिकालाई समृद्ध बनाईने बताउनु भएको छ।
उहाँले गरिब, निमुखा र सर्वहारा वर्गको हितमा कम्युनिस्ट सरकारले मात्रै काम गर्न सक्ने भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिचाँई र सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु योजना रहेको बताउनु भएको छ।
चुनावि आमसभालाई नेकपा एमाले केन्द्रीय अनुसान आयोग सदस्य गोविन्द कुँवर, नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य तथा पूर्व जिविस सभापति कृष्ण प्रसाद जैशि, प्रदेश कमिटी सदस्य मीन बहादुर कुँवर, जंग बिक, जयन्द्र स्वार, शिक्षक महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलक कुँवर, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख प्रकाश शाह, प्रवासी नेपाली संघ भारतका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मुकेश कुँवर, आकाश कुँवर, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा साँफेबगर नगर इन्चार्ज रमेश कुँवर, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हिरिण्ड कुँवर, वडा अध्यक्ष पदकाका उम्मेदवार कर्ण बहादुर साउँद, अनेरास्ववियुका जिल्ला सचिव भिम बडाहित, युवा संघका जिल्ला सचिव जितेन्द्र कुँवर लगाएतको सहभागिता रहेको थियो।
नेकपा एमाले साँफेबगर नगर कमिटी सदस्य भजन परियारले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको कार्यक्रमको संचालन युवा नेता सुरेन्द्र बहादुर शाहले गर्नु भएको थियो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २५, २०७९ १०:३१